Banyere Anyị - Huai'an Aide Hydraulic Machinery Co., Ltd.
auto ndoli ike nkeji
dc moto mgbapụta otu
okpukpu abụọ na-arụ ọrụ ike
ndụdụ inwego ike nkeji
bulie tebụl ike nkeji
nkeji ike gwongworo pallet
ike nkeji maka n'ọdụ ụgbọ mmiri leveler
tipper ụgbọala na-adọkpụ ike
multiplex agbanwe agbanwe
Huai'an Aide Hydraulics Co., Ltd.emi odude ke Huai'an na e guzobere na 2011. Ya isi ngwaahịa na-ọtụtụ-eji injinịa ígwè, n'ụlọ nkwakọba na njikwa, lọjistik na ụgbọala metụtara ígwè ubi. Ọ bụ ụlọ ọrụ nkwonkwo na ngwaahịa maka ịmịpụta nfuli gia, ike ike hydraulic, valvụ hydraulic, nzacha, cylinders, na hydraulic systems. Ngwaahịa ya bụ AC ụdị A, C, DC ụdị D, C. Akụkụ ndị dị mkpa: ụgbọ elu ụgbọ elu, forklifts, eletriki eletriki, ikpo okwu na-ebuli elu, ọkpọkọ benders, gwongworo ahihia. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọ nyela ọrụ nkwado maka akụrụngwa igwe, ụgbọala, akụrụngwa mmezi ụgbọala, ndị na-ebu ibu, akụrụngwa akụrụngwa, igwe ndị na-egwupụta akụ, igwe akwọ, ndị na-ekewa osisi, nyiwe na-ebuli elu na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ nwekwara ọkachamara na mmepụta na n'ùkwù nke mmanụ dị iche iche dị iche iche nke mmanụ eletrik, nke a haziri ma hazie site na iji ihe nkedo aluminom alloy dị elu, teknụzụ na-emezigharị alloy na teknụzụ ọgwụgwọ ọkụ.
Ọdịmma ngwaahịa pụtara ìhè. Ngwaahịa na-eduga ngwaahịa bụ nrụgide dị elu na obere mgbapụta, nfuli abụọ, ngalaba AC na DC, bụ nke ọkwa mba dị elu. A naghị ere ha naanị na China na Taiwan, mana a na-ebupụ ya na United States, Canada, Ireland, Italy na ahịa mba ndị ọzọ.
Isi ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ inye ụdị usoro hydraulic dị iche iche na mmepụta maka ndị ahịa dị iche iche. Gụnyere ọdụ ụgbọ mmiri hydraulic, valvụ akara dị iche iche na cartridge valves na ndị ọzọ na-akwado na nzukọ. Elu arụmọrụ, obere ume oriri.
Companylọ ọrụ a na-arapara na nkà ihe ọmụma azụmahịa nke "Ọkachamara Ọkachamara", "Ogo-Kasị Elu", "Ntugharị Ntugharị na Mgbanwe", na "Iguzosi Ike n'Ezi Ihe-Otu Obi". Iji mepụta ọdịnihu bara ụba na ndị ahịa bụ naanị ebumnuche anyị.
Companylọ ọrụ ahụ enwewo ngwa ọrụ mmepụta ihe na ụzọ nyocha zuru ezu, ma guzobe usoro njikwa njikwa mma.
Corporatelọ ọrụ anyị: àgwà maka nlanarị, ọsọ maka mmepe, ọkachamara ọkachamara n'ọdịniihu.
Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ dị mfe nke "Ogo nke Taa, Ahịa Echi", na ndị ọrụ enyemaka niile ga-aga n'ihu na-ejere ndị ahịa ngwaahịa dị elu.
Nabata ndị enyi sitere na ụdị ndụ niile ịbịa leta ma lelee ụlọ ọrụ anyị, daalụ maka ntụkwasị obi na nkwado gị
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na mmanụ hydraulic nke ...
Gịnị bụ a haịdrọlik ike unit
Ihe na-akpata ịma jijiji na mkpọtụ nke hydrauli ...
Kpọọ Anyị Ugbu a: 15905239130